Iiproteni zezilwanyana kunye nokusingqongileyo, indibaniselwano eyingozi | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Iiproteni zezilwanyana kunye nokusingqongileyo, indibaniselwano eyingozi
UFausto Ramirez | | Ezolimo zendalo, I-ecology
Ukuba kukho isondlo esichazwa kwimisipha, ngokuqinisekileyo kunjalo iiproteni. Ewe kunjalo, yeyona nto iphambili kwezihlunu zemisipha, igalelo lazo elifanele ukwenziwa yonke imihla xa umntu enomdla kwezemidlalo, xa efuna ukunciphisa umzimba, okanye ukukhathalela impilo. Ukwehla kobunzima kunye nokuziqhelanisa rhoqo ne Umsebenzi ifiziksi Ngokwenyani zibangela ukwanda kweemfuno zethiyori.
Le ndlela yokuqiqa yeyomzimba kwaye ngumba ophambili i ngcebiso isondlo. Kodwa ukuba sijonga ngakumbi indima yokutya kwindibano edibeneyo, imeko ayilula kangako. Ewe kunjalo, xa ndibona i- Ubume bendalo kwaye imeko yangoku yabemi behlabathi yokunyusa igalelo labo kwiprotein yezilwanyana, ekugqibeleni iqala ukudala ingxaki.
Ngoxa i uqikelelo zisikhokelela kubemi abangaphezu kwe-9,6 yezigidigidi kubaplanethi ngo-2050, ukugcinwa kolu hlobo lokusetyenziswa kwiiproteni zezilwanyana ngokwenene kuyingxaki yendalo. Kwinqanaba loluntu, hlaziya ukusetyenziswa kwe iiproteni izilwanyana zibalulekile. Ukuveliswa kwemfuyo kulawula kuphela i-70% yomhlaba olimekayo, kwaye i-40% yeenkozo ezilinywayo kwihlabathi liphela zimiselwe ukondla iinkomo ezihambisa lo mhlaba.
Le ngenye yeengongoma ezibalulekileyo ukuqinisekisa le mfuno ekhulayo iiproteni lwanyana. Kubalulekile ukonyusa imveliso yeesiriyeli eyonzakalisa ukuchuma komhlaba kunye nentlonipho yendalo. Isishwankathelo, ngelixa abantu abangaphezulu kwezigidi ezingama-840 besokola yindlala emhlabeni, kunye neebhiliyoni ezi-2000 iintsilelo isondlo, Inkqubo yangoku ibeka phambili isivuno samandla abuthathaka ukuphendula kwiimfuno ezikhulayo zeeproteni zezilwanyana ezonakalisa izisombululo zehlabathi, zombini isondlo, okusingqongileyo kunye noqoqosho.
Ewe, kuxhomekeke kuhlobo, i indleko ndinamandla yekhalori yezilwanyana eqikelelweyo imalunga ne-3 ukuya kwi-9 yeekhalori zemifuno. Ukuba sithatha umzekelo wenkomo ephakanyiswe kwimizi-mveliso kangangeminyaka emithathu ukubonelela nge-200 kilos inyama, le nkomo izakutya i-1300 kg yengqolowa kunye ne-7200 kg yefula. Ngokomndilili, i-7 yeekhilogram zokutya okuziinkozo ziyimfuneko ukuvelisa ikhilo yenyama kulimo olunzulu lwemfuyo. Ngubani othi ukulima, utsho nokusetyenziswa kwamanzi.
La ushicilelo amanzi Liyunithi yemilinganiselo ebonakalayo evumela ukulinganisa amanzi ayimfuneko kwimveliso yokutya kuwo onke amabakala, ngokuthe ngqo nangokungathanga ngqo. Phakathi konyaka we-1996 kunye no-2005, ukuprintwa kwamanzi eluntwini kwakukukhulu, i-92% yoku yayimiselwe i zolimo kunye ukufuya iinkomo. Ngokwengxelo epapashwe ngowama-2010 yi-HESCO ye-UNESCO, ukuveliswa kwekilo enye yenkomo kufuna iilitha ezili-15.000 zamanzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » I-ecology » Ezolimo zendalo » Iiproteni zezilwanyana kunye nokusingqongileyo, indibaniselwano eyingozi
Imithombo yamandla emitsha engaziwayo
Ngakumbi nangakumbi iifudo zaselwandle eFlorida zinamathumba